Filtrer les éléments par date : samedi, 02 novembre 2019
CNTEMAD: Hotanterahina ny 18 ka hatramin’ny 22 novambra ny fanadinana nasionaly
Namoaka fanambarana ny fitantanana ny CNTEMAD fa dia hotanterahina ny 18 ka hatramin’ny 22 novambra ny fanadinana nasionaly.
Tokony natao ny 21 hatramin'ny 25 oktobra 2019 io fanadinana io, saingy nifanindry tamin’ny andro nanatanterahana ny fihodinana faharoa manokana amin’ny fanadinana bakalorea ankapobeny, izay nanomboka alarobia ny 23 oktobra, ary ka hatramin’ny sabotsy 26 oktobra 2019.
Ho an’ny teto Antananarivo manokana, dia sady foibem-panadinana bakalorea ny Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) no foibem-panadinana amin’ny fanadinan'ny CNTEMAD ka izay no anton’ny nanemorana ny fanadinana, araka ny fanambarana nivoaka tamin’ny 8 oktobra 2019, ary dia izao nivoaka izao ny datim-panadinana.
Ambositra: 4x4 nifaoka mpivarotra amoron-dalana, roa namoy ny ainy
Nandriaka rà teto Iajaky-Ambositra androany tokony ho tamin’ny iray ora tolakandro. Fiara 4x4 nentina vadina lehibena andrimpanjakana iray no nirifatra tampoka ka nifaoka mpivarotra amoron-dalana. Olona roa namoy ainy, ka tovolahy vao afaka bakalôrea teo ny iray, vehivavy bevohoka ny faharoa ; olona enina hafa naratra, ary tsaboina ao amin’ny hopitaliben'Ambositra.
Nihodina an-dalana, no fahitan’ny olona ilay fiara 4x4, tampoka teo anefa dia niroso namantana tany anaty olona, fa hoe nifangaro ny fanitsahana ny hisatra sy ny fanafainganam-pandeha, ka izay no mety nampirifatra tampoka ilay fiara, ka nandona sy nanitsaka izay rehetra teny alohany.
Andro tsena eto Ambositra rehefa sabotsy toy izao, betsaka ny olona mifamoivoy, somary teritery ihany koa ny nitrangan’ny loza.
Nijery ireo naratra ny olomboafidy sy solontenam-panjakana eto Ambositra, handray an-tanana ny fitsaboana ireo maratra sy ireo niharam-boina ny fanjakana.
samedi, 02 novembre 2019 18:42
Rugby: Tompondaka erantany ny Springboks Afrikanina tatsimo
Voahosotra ho tompondaka manerantany amin’ny rugby ny Springboks Afrikanina tatsimo rehefa nandresy ny XV de la rose Anglisy tamin’ny isa 32 noho 12 nandritra ny lalao famaranana natao androany tao amin’ny Nissan Stadium, Yokohama.
samedi, 02 novembre 2019 10:04
Antsirabe: Ravan’ny Zandary ny tambazotra iray mpanondrana olona
Olona roa, lahy sy vavy, no voasambotry ny Zandary avy ao amin'ny Kaompania Antsirabe, rehefa nokarohina andro maromaro. Voarohirohy amina fanondranana olona izy ireo.
Mitady olona tena sahirana ara-pivelomana eto Antsirabe izy ireo, ary mivarotra izany amin'ny mpanam-bola, ka 40 tapitrisa ariary no hivarotany ny olona iray. Alainy am-pitaka moa ireo olona sahirana ireo, satria lazainy fa hoentina hikarama any Toamasina, ary omena karama 120 000 ar. Afaka mitondra vady amanjanaka.
Noraisim-potsiny ireto mpanao ratsy, niaraka tamin'ny olona fito mianaka saika hamidy. Efa natolotra ny Fitsarana izy ireo, fa mbola mitohy ny fikarohana ireo mety ho namany.
samedi, 02 novembre 2019 09:57
Ambatofotsy – Atsimondrano: Tovolahy hita faty nihatona tao anaty ala kesika
Hatairana ny an’ny olona io maraina io, teny anaty ala kesika eny Ifarihy, Kaominina Ambatofotsy, Distrika Antananarivo Atsimondrano, nahita tovolahy herotrerony, mihatona eny ambony kesika, mifatotra amin’ny tendany.
Manao fanamiana fitondra mihazakazaka izy, nefa kapa maivana « scoubidou » no eny an-tongony.
samedi, 02 novembre 2019 09:56
Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes.